Uncedo lwasemva kokubanjwa-Indlela umntu aphikisana ngayo ne-PCR kunye nokubonisa ukungasebenzi ngokufanelekileyo kwesiluleko kwabamangalelwa abajamelene nokugxothwa eNew Jersey. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Akohlulwanga / Uncedo lwasemva kokubanjwa-Indlela umntu aphikisana ngayo ne-PCR kunye nokubonisa ukungasebenzi ngokufanelekileyo kwesiluleko kwabamangalelwa abajamelene nokugxothwa eNew Jersey.
[youtube id = "mwX4tnkGYus" wide = "600 ″ urefu =" 350 ″ autoplay = "no" api_params = "" class = ""
Ngaphakathi kwiLizwe laseNew Jersey, uXwebhu malunga nokuThunyelwa kuXolelwaniso (PCR) luhlobo lwezicelo zokugqibela ezifakwe kwiNkundla ePhakamileyo. Ngokubanzi, izicelo ze-PCR kufuneka zifakwe ngaphakathi kwi-5 iminyaka yokugwetywa ngokwemigaqo yeNkundla yaseNew Jersey. Nangona kunjalo, abagwebi banokuwuphumza lo mthetho. Inkundla kufuneka iqwalasele ubukhulu kunye nonobangela wokulibaziseka kunye nokubaluleka kwebango lommfaki-sicelo. Jonga State v. DiFrisco, 187 NJ 156, 166 (2006). Ukungekho sikweni okulula okwenzekileyo akwanele, kwaye umthwalo wobungqina uxhomekeke kumfaki-sikhalazo ngokulungiselela ubungqina obuqinisekileyo bokuba unelungelo lokukhululeka. Bona State v. Marshall, 126 NJ Super. I-60, 69 (Ch. Div. 1990).
Yintoni uxwebhu lwezikhalazo kwi-PCR eNew Jersey?
Ngokubanzi, uxwebhu lwezikhalazo lwe-PCR luyaqondakala ukuba lisekwe kwisigqibo sokumiselwa kwesigwebo ngokungangqinelani nomthetho, ukusilela kolawulo lwenkundla, okanye ukuphikiswa okukhulu kwamalungelo omgaqo-siseko.
Esona siphikiso siqhelekileyo phantsi kwesicelo se-PCR luluncedo olungasebenziyo lwesiluleko olusekwe kulungiso lwesithandathu loMgaqo-siseko wase-US. ENew Jersey, i-Strickland-Cronic standard ibeka indlela umntu anokuhlangabezana ngayo nomthwalo wokubonisa uncedo olungalunganga lweengcebiso. Okokuqala, kufuneka ubonise ukuba isiluleko eso besingasebenzi ngokuwela phantsi komgangatho wokuqonda. Okulandelayo, umfaki-sikhalazo kufuneka abonise ukuba ukungasebenzi kakuhle kukhetha ukuzikhusela. Kuphela kusemva kokuba zombini ezi prongs zidibene, inkundla inakho ukukhululeka.
ENew Jersey, abafaki zicelo be-PCR baxoxa ngoncedo olungasasebenziyo lwesiluleko malunga nokusilela kokucetyiswa ngeziphumo zokufudukela kwelinye ilizwe liwela phantsi kwemigangatho emibini eyahlukeneyo. Ngaphambi kwecala lePadilla ukusuka kwi-2010, ulawulo oluqhelekileyo lweNunez-Valdez. Ngaphantsi kukaNunez-Valdez, igqwetha alinaso isibophelelo sokuvuma ukucebisa umthengi wakhe ngemiphumela yokufudukela kwelinye ilizwe. Ngaphantsi kukaPadilla, nangona kunjalo, igqwetha liyacelwa ukuba licebise umthengi walo ngeziphumo, kwaye ukusilela ukwenza oko kunokuvumela ukuboniswa phantsi komgangatho weStrickland-Cronic wokukhululeka kwePCR.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Eli nqaku le-blog alibhalwanga ukunika ingcebiso kwezomthetho. Eli nqaku luphononongo ngokubanzi kwaye alizibandakanyi nawo wonke umthetho wezomthetho kunye nokuqinisekiswa kwesicelo se-PCR. Kuya kufuneka ukuba udibane negqwetha malunga nesicelo sakho se-PCR kwaye ungaxhomekeki kumxholo weli nqaku.